Abavelisi beHDPE kunye nababoneleli - China iHDPE Factory
1oz 30ml ebomvu iHDPE ibhotile ngeenxa 16-410 entanyeni entanjeni
Ibhotile yethu ebomvu eyi-30ml yenziwe ngezinto ze-HDPE. Inkonzo ye-OEM: Ilogo yoshicilelo lwesilika yesilika, ileyibhile yePhepha, ileyibhile yePlastiki, ukugoba ukugoba Kulula ukuyisebenzisa kwaye ucocekile. Ngaba unokwenza ilogo yenkampani yakho, yonyuse isiphumo sophawu lwenkampani yakho. Ubume bebhotile yeplastikhi bumbumbene, ikunikezela ngamava wesandla esingcono kunye nesiphumo seshelufu. Ikepusi ibhotile isebenzisa Screw cap kunye uphawu iplagi ukuqinisekisa 100% ukutywina imveliso. Ingasetyenziselwa ukuhambisa kunye nokugcina i-liquids ezininzi. Ibhotile.
1oz 30ml emhlophe iHDPE ibhotile tyaba nge 18-410 entanyeni entanjeni
Ibhotile yethu 1oz 3ml emhlophe yenziwe ngezinto iHDPE. Yenziwe nge-100% yezinto zokuqala zePET resin. bonisa ijeli, njl. Inkonzo ye-OEM: Ilogo yoshicilelo lwesilika yesilika, ileyibhile yePhepha, ileyibhile yePlastiki, ukugoba ukugoba Kulula ukuyisebenzisa kwaye ucocekile. Ubungakanani obuncinci bulungele ukuhamba okanye ukugcinwa kunye nokulungelelaniswa kwekhaya.
3.4oz 100ml emhlophe iHDPE ibhotile ngeenxa zonke 18-410 entanyeni entanjeni
I-3ml yendalo ye-Gynecological cotton suppository management device
I-3ml yethu yesicelo sobufazi / sempundu senziwe ngezinto ze-PE, ezinokutywinwa okungcono kunye nokutyibilika. Ingasetyenziswa njengesixhobo sokuhambisa iziyobisi kumgubo wepilisi. Umbhobho ngumbhobho ojikelezayo kunye nobubanzi obukhulu. Ngaba unokubonelela ngokuziva ngcono kunye neshelf yokubonisa isiphumo. Xa usebenzisa, inyathelo lokuqala kukususa isiciko sangaphambili kunye nesembozo esingasemva, inyathelo lesibini kukuthumela ngaphandle iyeza kwilungu lobufazi okanye ezimpundu, kwaye inyathelo lesithathu kukusebenzisa isiciko eside ukutyhala intonga yokutyhala ungene kumbhobho ukutyhala iyeza elikwityhubhu lingene kwilungu lobufazi okanye ezimpundu. Ingasetyenziselwa ukuhanjiswa kweziyobisi kwilungu lobufazi, ukhathalelo lobufazi, ukuhanjiswa kweziyobisi ezimpundu, kunye nokupakishwa kukhathalelo lwasemva. Kulula ukuphatha kwaye usebenzise. Isicelo sethu selungu lobufazi yimveliso yokupakisha yexesha elinye kwaye inokupakishwa ngokukodwa. Ukuba unesimo esingcono, sinokukubonelela ngokulungiswa okwenziwe ngokwezifiso.
Isixhobo solawulo lwe-5ml yendalo ye-Gynecological cotton suppository
I-5ml yethu yelungu lobufazi / umva wesixhobo senziwe ngezinto ze-PE, ezinokutywinwa okungcono kunye nokutyibilika. Ingasetyenziswa njengesixhobo sokuhambisa iziyobisi kumgubo wepilisi. Umbhobho ngumbhobho ojikelezayo kunye nobubanzi obukhulu. Ngaba unokubonelela ngokuziva ngcono kunye neshelf yokubonisa isiphumo. Xa usebenzisa, inyathelo lokuqala kukususa isiciko sangaphambili kunye nesembozo esingasemva, inyathelo lesibini kukuthumela ngaphandle iyeza kwilungu lobufazi okanye ezimpundu, kwaye inyathelo lesithathu kukusebenzisa isiciko eside ukutyhala intonga yokutyhala ungene kumbhobho ukutyhala iyeza elikwityhubhu lingene kwilungu lobufazi okanye ezimpundu. Ingasetyenziselwa ukuhanjiswa kweziyobisi kwilungu lobufazi, ukhathalelo lobufazi, ukuhanjiswa kweziyobisi ezimpundu, kunye nokupakishwa kukhathalelo lwasemva. Kulula ukuphatha kwaye usebenzise. Isicelo sethu selungu lobufazi yimveliso yokupakisha yexesha elinye kwaye inokupakishwa ngokukodwa. Ukuba unesimo esingcono, sinokukubonelela ngokulungiswa okwenziwe ngokwezifiso.
17 oz ecacileyo iHDPE ubambe ibhotile yeplastiki yokutshiza nge-28-400 yokugqiba kwentamo
Iibhotile zethu ezingama-17 oz / 500ml ezingamanzi zenziwe ngezinto ze-HDPE ukuze ziqiniswe kwaye ziqine. Umzimba webhotile ubanjwe ngesandla, ikunike amava angcono esandla kunye neshelf igxalaba le-28/400 linokuxhotyiswa ngempompo yokutshiza, impompo yokutshiza kunye nempompo yegwebu, ekulungele ngakumbi ukuyiphatha kunye nokuyisebenzisa.Can ingasetyenziselwa ukucoca ikhitshi, ukucoca amanzi, ukucoca iimveliso kunye nokunye ukupakisha.
Uhlobo olutsha lwe-3-5ml emhlophe yendalo yokuhambisa ubufazi
Ityhubhu yethu yelungu lobufazi le-4ml yenziwe ngezinto ze-PE, ezinokutywinwa okungcono kunye nokutyibilika. Umbhobho ujikeleze kwaye intonga yokutyhala yangaphakathi ixhotywe ngeringi ye-silicone, enefuthe lokutywina elingcono. Ngaba unokubonelela ngokuziva ngcono kunye neshelf yokubonisa isiphumo. Xa usetyenziswa, inyathelo lokuqala kukususa isiciko esingaphambili kunye nesomva, inyathelo lesibini kukungqamanisa imveliso kunye nelungu lobufazi okanye umva, kwaye inyathelo lesithathu kukusebenzisa isiciko eside ukutyhala intonga yokutyhala ityhubhu yokutyhala iyeza elikwityhubhu kwilungu lobufazi okanye ezimpundu. . Ingasetyenziselwa ukuhambisa iziyobisi kwilungu lobufazi, ukhathalelo lobufazi, ukuhanjiswa kweziyobisi ezimpundu, ukupakishwa kukhathalelo lwasemva, njl njl.
Uhlobo olutsha 3ml yendalo kwisixhobo sokuhambisa iziyobisi
I-3ml yethu yejeli yelungu lobufazi yenziwe ngezinto ze-PE, ezinokutywinwa okungcono kunye nokutyibilika. Umbhobho ujikeleze. Ngaba unokubonelela ngokuziva ngcono kunye neshelf yokubonisa isiphumo. Xa usebenzisa, inyathelo lokuqala kukususa isiciko esingaphambili kunye nesomva, inyathelo lesibini kukungqamanisa indawo yokuphuma iziyobisi kwilungu lobufazi okanye ezimpundu, kwaye inyathelo lesithathu kukusebenzisa isiciko eside ukutyhala intonga yokutyhala ungene kumbhobho ukutyhala iyeza elikwityhubhu lingene kumbhobho okanye kwilungu lobufazi okanye ezimpundu. Ingasetyenziselwa ukuhambisa iziyobisi kwilungu lobufazi, ukhathalelo lobufazi, ukuhanjiswa kweziyobisi ezimpundu, ukupakishwa kukhathalelo lwasemva, njl njl. Kulula ukuphatha nokusebenzisa.
Ibhotile tyaba ye-2000ml epinki ene-56-410 yokugqiba kwentamo
Ibhotile yeplastikhi ene-2L yethu (ubungakanani obuphezulu be-polyethylene) eneZiciko, ihlala ixesha elide kwaye iphinda isetyenziswe kwakhona.Iyilungele ioyile efanelekileyo, isepha, into yokuthambisa, ishampu yomzimba, ioyile yomzimba, ipeyinti, i-inki, ulwelo lwelebhu, iikhemikhali, i-pigment, i-reagent, iiglu kunye nezinto zokuncamathelisa, iisampulu, ukusetyenziswa kwemihla ngemihla okanye iimveliso ezenziwe ekhaya. Ichasene kakhulu neeoyile ezininzi kunye neekhemikhali., Nangona kunjalo ayifanelekanga ukubola okumandla kunye nokungena okunamandla kwezinyibilikisi eziphilayo.
Ibhotile yesikwere ye-1000ml eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokugqitywa kwentamo eyi-56-410
1L yethu iHDPE (polyethylene mninzi) Bottle zeplastiki ezineziciko, ixesha elide kwaye zinokuphinda zisetyenziswe.Yifezekile ioyile efunekayo, into yokuthambisa, ishampu, ioyile yomzimba, ipeyinti, i-inki, ulwelo lwelebhu, iikhemikhali, i-pigment, i-reagent, iiglu kunye nezinto zokuncamathelisa, iisampulu, ukusetyenziswa kwemihla ngemihla okanye iimveliso ezenziwe ekhaya. Iyaxhathisa kakhulu kwioyile ezininzi nakwiikhemikhali., Nangona kunjalo ayifanelekanga ukubola okumandla kunye nokungena okunamandla kwezinyibilikisi eziphilayo.